Ahoana ny fomba hisorohana ny alikako tsy hihinana fako | Tontolo alika
Mandeha milamina miaraka amin'ny alikanao ianao, ary tampoka dia hitanao fa nisy tohika kely teo amin'ny tadiny. Rehefa tsapanao izany dia efa tara: misy mihinana amin'ny tany! Na dia ratsy kokoa aza izany indraindray. Eny, eny, mety ho ratsy kokoa aza. Mety tsy mihinana ny tany fotsiny io, fa koa izay ao anaty fitoeram-pako ao an-trano ... na ivelany.
Ity dia olana iray izay tsy maintsy vahana haingana araka izay azo atao, satria fantatsika ny fako biolojika, saingy eny an-dalambe tsy fantatsika raha nisy nametraka poizina. Ka holazaiko aminao izany ny fomba hisorohana ny alikako tsy hihinana fako.
1 Tao an-trano
2 any ivelany
Rehefa ao an-trano isika dia misy zavatra maromaro tsy maintsy atao:
Fisorohana ny alika tsy hiditra amin'ny fako: Mba hanaovana izany dia azonao atao ny mampiasa repellants ho an'ny alika ary, isaky ny mahita azy manatona ianao dia lazao mafy ny TSIA (tsy mikiakiaka). Ary koa, tsy maintsy manary ny fako isan'andro ianao mba hisorohana ny fofona tsy ho matanjaka.
Zarao amin'ny fisotroana marobe ny sakafonao: amin'izany dia hiantoka isika fa be loatra ny rafi-pandevonan-kanina mandritra ny andro, ka tsy mila mihinana firy ny alika.
Omeo sakafo kalitao tsara izy: indraindray mitranga ny alika mihinana avy amin'ny fako satria ny sakafony mahazatra dia tsy mahafa-po azy tanteraka; arak'izany, anolorana azy ireo hanome azy sakafo matanjaka, miaraka amin'ny atiny misy hena avo. Safidy iray hafa ny manome azy sakafo manta na BARF.
Rehefa mandeha mitsangatsangana isika dia mila mahafantatra tsara izay mety ho eny an-dalambe hahafahantsika mihetsika ara-potoana. Ary ahoana no ahafahanao misoroka ny alika tsy haka zavatra amin'ny tany? niandry. Ity no lakile. Raha vao mahita zavatra ianao dia asehoy mpitsabo doggie izy ary avereno izy. Manodidina ny zavatra eny an-dalambe ary omeo azy io ny fitsaboana.
Zava-dehibe ny fahafantaranao fa tsy maintsy atao izany avereno im-betsaka Mba hahafantaran'ny alika azy dia amboary harona misy tsaboina ary ento miaraka aminao an-tongotra.
Amin'ny faharetana sy faharetana dia hampijanona ny alikanao tsy hihinana amin'ny fako intsony 😉.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana ny fomba hisorohana ny alikako tsy hihinana fako
Alika sy gana, namana vaovao